Waa maxay AuthorRank iyo Maxay muhiim u tahay | Martech Zone
Jimco, Febraayo 17, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan ku mashquulsanaa macaamiishayda waanan joognay isku darka koodhka qoraaga dhammaan boggeena WordPress tan iyo markii la arkay natiijooyin aan caadi ahayn ee ku sameynaya bartayada. Waa kuwan sawir-gacmeed weyn oo kaa caawinaya kor u qaadista qoraaga xitaa sii dheer qalinka ereyga, QoraaRank.
Celcelis ahaan qoraa, suuqgeeye ama soo saare maaddo, AuthorRank waxay soo bandhigeysaa fursad weyn oo loogu talagalay sumadeynta shaqsiyeed, laakiin sidoo kale waxay naga dhigeysaa shaqsi ahaan mas'uul ka ah tayada shaqada aan soo saarno. Qiimeynta tayada waxyaabaha waa shaqada Google, u guuritaanka mustaqbalka waa iska cadahay Google inay raadineyso qiimeynta tayada qorayaasha. Marka la fahmo AuthorRank hadda, qorayaashu waxay dhisi karaan naftooda iyo shaqadooda isku-darka ah ee u qalma in la kala saaro. Infographic by BlueGrass.
Meesha cad ee qabow ee ku jirta Infographic waxaa loogu talagalay fiidiyaha soo socda:
Tags: qoraagaisku xirka qoraagaqoraaqoraabluegrasssuuq geynta buluugrassdaabacaadanqoraaga relserp
Feb 21, 2012 markay ahayd 6:51 PM
Waxaan xiiseynayaa inaan ogaado sida rel = ”qoraaga” looga faa’iideysan karo ganacsiyada.
Feb 21, 2012 markay ahayd 6:55 PM
Nabadeey @carrinli: disqus! Adoo si muuqata u soo bandhiga qorayaasha meheradda, meheraddaadu waxay dhisi kartaa awood. Dhagsii heerarka ku saabsan qorista mashiinka raadinta ee la qoro waxay u egtahay mid ka sarreeya tan iyo markii ay arkeen inaysan ahayn bot ama barta spam, sidaas darteed waxaad sidoo kale soo jiidan doontaa booqdayaal badan oo ka yimaada makiinadaha raadinta. Waxaan aragnay horumar muuqda oo ku saabsan tirada dadka waawayn oo gujinaya qoraalladayada baloogyada makiinadaha raadinta tan iyo markii aan qaadanay xiriiriyeyaasha qoraaga.
Apr 4, 2012 at 4: 52 PM
Marka anigu xoogaa ma caddeyn - miyaan karnaa inaan ku ISTICMAALno infographic-ka degelladayada oo aan gelino fiidiyowga - ama maxay ahayd ujeeddadaadu? Xaqiiqdii waa qabow, BTW - waana hubaal mowduuc kulul.
Apr 4, 2012 at 5: 14 PM
Infographics waxaa loogu talagalay in la wadaago, Jeanette! Midkan gaarka ah waxaa sameeyay BlueGrass… dadka jacaylka wadaaga iyaga… ilaa iyo inta aad haysato mahadsanid wacan oo leh xiriir u dhigma oo ku soo noqda boggooda!